FAMPAHALALANA MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SIBERIA - ALIKA
Fampahalalana momba ny fiompiana alika siberia
Alika siberianina Husky / Labrador retriever mifangaro alika
Miaraha miasa ny sôkôla antsasaky Labrador retriever antsasany Husky Siberia mifangaro- 'Ny alikan'ny mpiompy dia nivoaka ary ny iray amin'ireo sôkôlika Labs dia nifanambady tamin'ny iray tamin'ireo Huskies. Cooper dia iray amin'ireo alika amin'ny oops fako . '
Ny Aliberiana Siberia Retriever dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Husky Siberia ary ny Labrador retriever . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro . Tsy alika mitovy amin'ilay purebred io Labrador husky .
'Ny laboratoara / Husky 6 herinandro ahy an-tongotra kely any Houston, Tx. Carmine no anarany ary fanahy adala izy! '
Rhea the Siberian Retriever (Husky / Lab) alika amin'ny 11 herinandro- 'Rhea no hany vavy tamin'ny a fako dimy alika kely 'oops'. Ny iray tamin'ireo rahalahiny ihany koa no teraka niaraka tamin'ireny fitokonana ireny maso manga . I Rhea dia alikakely tena mahay. Vao herinandro fotsiny dia efa nankato ny baiko fototra izy! Nanomboka tamin'ny fiofanana momba ny fitsaboana mahazatra aho (izany hoe: mitazà azy hipetraka, ento amin'ny tany hatory sns.). Roa herinandro izao no nananako azy ary mankatoa izy nefa tsy mampiasa fitsaboana. Azony tsara izany mitsambikina amin'ny olona dia tsy ny fomba hisarihana ny saina, noho izany dia mipetraka izy, indraindray manala ny rivotra, ary miondrika kely. Mianatra mipetraka amin'ny toerana mangataka aza izy ary mihodina! Mamy be i Rhea. Tiany REHETRA! Zaza, ankizy, ary biby hafa tafiditra. Nandry tamim-behivavy kely izy, nefa izy teething , ka ny fitazonana ny zavatra rehetra ho lavitra ny kilalaony dia tena zava-dehibe. Izy mihaino 'tsia' eny, raha sendra misy zavatra tsy tokony hataony izy dia tsy sarotra ny mampijanona ny fihetsika ratsy. Tian'i Rhea ny milalao, saingy milamina foana izy ao an-trano. Raha vantany vao mivoaka eo an-tokotany izahay, dia nihazakazaka izy ary nitsambikina eraky ny toerana, nibolisatra. Tsara ny vitany tamin'ny fotoana nilalao 30 mn indroa isan'andro. Mivoaka ihany koa izy mba hamaky vilany matetika mba hialana amin'ny lozam-pifamoivoizana ao an-trano. Raha fintinina izany rehetra izany dia alika malina sy vonona ary sariaka i Rhea. Raha mbola manana fotoana any ivelany mihazakazaka sy milalao izy, mieritreritra aho fa afaka nanao zavatra tsara tamin'ny tontolo iainana ary biby fiompy mahafinaritra tokoa izy, satria mifanerasera amin'ny olona sy ny zavatra hafa rehetra! '
Dory ny Labrador / Husky mifangaro
'Ity no Max, Husky / Labrador na Huskador, Labusky, 2 taona antsika. Mariho ny fototarazo merle maso manga. Ny anarany dia olombelona heterochromatic, Max Scherzer, siny baseball ho an'ny Washington Nationals. '
'Rudy the Siberian Husky / Lab mifangaro ao anatin'ny 8 volana mankafy milomano ao an-trano - tena sariaka izy ary tia ny rehetra. Fa tiako ny mihinana ny kiraroko rehetra amin'ny mpanakorontana, fa ahoana no hahasosotra anao amin'izany endrika izany? Manana ny maha izy azy izy, tsy mampino fa afaka mampihomehy anao foana izy. '
'Araho ny Husky / Lab any Siberia ahy tamin'ny andro voalohany nitondranay azy nody tamin'ny 5 herinandro, ary fotoanan'ny fandroana izao! Tiany ny milalao anaty rano, ary ankehitriny manandrana miditra ao amin'ny fandroana foana izy rehefa ao ianao. '
Garrus the Siberian Retriever toy ny alika kely amin'ny 15 herinandro— 'Garrus dia fifangaroan'ny Siberia Husky / mainty Labrador. Tena mahery vaika izy, tia milalao amin'ny karazana rano (ny renirano no tiany) ary manome ny oroka tsara indrindra! Nesorinay avy tao amin'ny Craigslist izy ary nentinay nody tao amin'ny 6 herinandro (somary aloha be, saingy mety izany.) Tiany ny manenjika saka, fa tsy mbola nandratra anay mihitsy. Tsy miraharaha ny ankamaroany. Alika hafa anefa no tiany! Entinay any amin'ny valan'alika izy, fara fahakeliny, in-3 isan-kerinandro. Izy dia manana fipoahana milalao amin'ireo alika lehibe kokoa ao anaty renirano ao ambadiky ny valan-javaboary. Mila mijery azy akaiky ny manodidina ny alika kely kokoa isika, satria mirona milalao somary masiaka izy. Garrus dia tena marani-tsaina ary nianatra 'nipetraka' tamin'ny herinandro voalohany niaraka taminay. Vao 4 volana no nahavoa azy tamin'ity herinandro ity ary milanja 30 lbs kely ihany. !! Tsy andrintsika izay hahitany ny halehibeny ho azony. Tena mivadika tovolahy tsara izy. :) '
Garrus the Siberian Retriever toy ny alika kely
Garrus the Siberian Retriever toy ny alika kely amin'ny 6 herinandro
Jereo ny ohatra misimisy kokoa momba ny Siberian Retriever
Sary Siberian Retriever Pejy 1
Sarin'i Siberian Retriever Pejy 2
amboa volo mainty alika omby
habe mastiff lanja sy lanja
sarin'alika alika vava mainty
mixer coton de tulear havanese
mainty sy fotsy staffordshire terrier